Tijaabada Bacriminta Shiinaha Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Tijaabada Caafimaadka > Tijaabada Dhalmada
Baaritaanka dhalmada waxaa loola jeedaa baaritaanka jirka ee lammaanaha aadaan isbitaalka ka hor inta aysan u diyaar garoobin inay uur qaadaan, si loo hubiyo dhalashada cunug caafimaad qaba, si ay u gaaraan dhalasho caafimaad qabta. Baaritaanka uurka ka hor wuu ka duwan yahay baaritaanka jireed ee caadiga ah, badiyaa habka taranka iyo arrimaha hiddaha ee baaritaanka. Labada nin iyo naagtuba waxay si wada jir ah u sameeyaan baaritaanka uurka ka hor ee walxaha la xiriira, si ilmaha loo siiyo dammaanad asaasi ah oo caafimaad qabta inta uu nool yahay. Ilmaha caafimaadka qaba waa in uu marka hore isugu jiraa shahwad caafimaad qabta iyo ukun, sidaas awgeed ragga sidoo kale waa in la baaro. Waqtiga ugu fiican ee baaritaanka uurka ka hor waa 3 ilaa 6 bilood uurka ka hor.
Haddii ay jiraan cudurrada hiddaha ee cad ee qoyska, dadku waxay fiiro gaar ah u yeelan doonaan dhinacan baaritaanka marka ay dhalayaan, si miyir leh ula tasho dhakhtarka. Si kastaba ha ahaatee, waalidiinta qaar, sida dadka caadiga ah, waa sidayaal hidde-sidaha cudurka hidde-sideyaasha. In kasta oo iyaga laftoodu aanay cudurka qabin, haddana waxay u badan tahay inay u sii gudbiyaan jiilka soo socda. Tusaale ahaan, carruurta leh albinism, waalidkiis waxay la mid yihiin dadka caadiga ah, laakiin ilmuhu wuxuu leeyahay maqaar jilicsan, timo cirro leh iyo muuqaalo kale. Tijaabada bacriminta ayaa sidaas darteed aad muhiim u ah
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira kumanaan cudurro hidde-side ah, kuwaas oo intooda badan aan lahayn daaweyn xidid. Marka ay dhashaan carruurta qaba cudurrada hidde-sideyaasha, waxay la kulmi doonaan dhib iyo culays xagga qoysaskooda iyo bulshada sababtoo ah si buuxda looma daweyn karo. Sidaa darteed, Tijaabada Dhalmada ee Cudurrada Hidde-raaca waa muhiim, waana in la sameeyaa habab kala duwan oo baaritaanno ah si looga hortago dhalashada carruurta qaba cudurrada hidda-socodka.
Qalabka Imtixaanka Uurka iyo Baarista Uurka
Waxaan bixinaa Tijaabada Uurka iyo Qalabka Tijaabada Fecundity kaas oo ah mid degdeg ah, hal-tallaabo socodka lateral immunoassay ee go'aaminta tayada ee shaybaarada kaadida aadanaha, si ay u caawiso ogaanshaha hore ee uurka. Tijaabooyinku waxay ku diyaarsan yihiin xariijimo, cajalado iyo qaab dhex-dhexaad ah.
Dumarka Kaadi Degdega ah Fsh Follicle Kicinta Hormoonka Cassette
Dumarka kaadida degdega ah ee FSH follicle stimulating hormone caseette: Baaritaanada uurka waa mid ka mid ah su'aalaha ugu muhiimsan ee haweeneydu ka qabto uurka. Sidee ku ogaan kartaa haddii aad ilmo dhashay? Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo qaado baaritaanka uurka. Laakiin mabaadi'da ugu muhiimsan waa isku mid. Markay uur yeelato, ukunta bacrimisay waxay si joogto ah u qaybisaa unugyada waxayna soo daysaa hormoon la yiraahdo hCG (hormoonka chorionic). Marka hCG uu galo dhiigga hooyada, waxa ay ka soo saartaa kaadideeda kelyaheeda. Marka fiirsashada gaadho dherer gaar ah, ilaa inta iyada oo loo marayo ogaanshaha reagent baaritaanka uurka, ogaan kartaa in uu jiro uur guul leh.
Xarigga Imtixaanka Degdegga ah ee Uurka Dijitaalka ah ee Hcg
Xarigga tijaabada degdega ah ee uurka HCG: Baaritaannada uurku waa mid ka mid ah su'aalaha ugu muhiimsan ee haweeneydu ka qabto uurka. Sidee ku ogaan kartaa haddii aad ilmo dhashay? Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo qaado baaritaanka uurka. Laakiin mabaadi'da ugu muhiimsan waa isku mid. Markay uur yeelato, ukunta bacrimisay waxay si joogto ah u qaybisaa unugyada waxayna soo daysaa hormoon la yiraahdo hCG (hormoonka chorionic). Marka hCG uu galo dhiigga hooyada, waxa ay ka soo saartaa kaadideeda kelyaheeda. Marka fiirsashada gaadho dherer gaar ah, ilaa inta iyada oo loo marayo ogaanshaha reagent baaritaanka uurka, ogaan kartaa in uu jiro uur guul leh.
Safty Lh Ovulation Tijaabi Degdegga ah ee Dhexdhexaadinta
Badbaadada LH Ovulation Baaritaanka Degdegga ah ee Dhexdhexaadinta: Baaritaannada uurku waa mid ka mid ah su'aalaha ugu muhiimsan ee haweeneydu ka qabto uurka. Sidee ku ogaan kartaa haddii aad ilmo dhashay? Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo qaado baaritaanka uurka. Laakiin mabaadi'da ugu muhiimsan waa isku mid. Markay uur yeelato, ukunta bacrimisay waxay si joogto ah u qaybisaa unugyada waxayna soo daysaa hormoon la yiraahdo hCG (hormoonka chorionic). Marka hCG uu galo dhiigga hooyada, waxa ay ka soo saartaa kaadideeda kelyaheeda. Marka fiirsashada gaadho dherer gaar ah, ilaa inta iyada oo loo marayo ogaanshaha reagent baaritaanka uurka, ogaan kartaa in uu jiro uur guul leh.
Kaadhka Baarista Uurka ee kaadida Guriga
Kaadhka baaritaanka kaadida ee guriga: Baaritaannada uurku waa mid ka mid ah su'aalaha ugu muhiimsan ee haweeneydu ay ka qabto uurka. Sidee ku ogaan kartaa haddii aad ilmo dhashay? Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo qaado baaritaanka uurka. Laakiin mabaadi'da ugu muhiimsan waa isku mid. Markay uur yeelato, ukunta bacrimisay waxay si joogto ah u qaybisaa unugyada waxayna soo daysaa hormoon la yiraahdo hCG (hormoonka chorionic). Marka hCG uu galo dhiigga hooyada, waxa ay ka soo saartaa kaadideeda kelyaheeda. Marka fiirsashada gaadho dherer gaar ah, ilaa inta iyada oo loo marayo ogaanshaha reagent baaritaanka uurka, ogaan kartaa in uu jiro uur guul leh.
Kolloidal Dahab Hal-tilaabo Kaadi Degdeg ah Hcg Xarigga Imtixaanka Uurka
Dahabka kolooyida Hal-talaabo kaadi degdeg ah hcg xariijimaha tijaabada uurka: Baaritaanada uurka waa mid ka mid ah su'aalaha ugu muhiimsan ee haweeneydu ka qabto uurka. Sidee ku ogaan kartaa haddii aad ilmo dhashay? Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo qaado baaritaanka uurka. Laakiin mabaadi'da ugu muhiimsan waa isku mid. Markay uur yeelato, ukunta bacrimisay waxay si joogto ah u qaybisaa unugyada waxayna soo daysaa hormoon la yiraahdo hCG (hormoonka chorionic). Marka hCG uu galo dhiigga hooyada, waxa ay ka soo saartaa kaadideeda kelyaheeda. Marka fiirsashada gaadho dherer gaar ah, ilaa inta iyada oo loo marayo ogaanshaha reagent baaritaanka uurka, ogaan kartaa in uu jiro uur guul leh.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Tijaabada Dhalmada oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Tijaabada Dhalmada soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Tijaabada Dhalmada la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.